Iifonti eziSimahla ezi-5 (VI) | Khuphela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ufumene umhlaba weefonti, kwaye uziva isidingo sokufumana zonke ezasimahla onokuzifumana. Ewe, ukusuka apha ndiyakulumkisa ukuba ayisiyondlela ilungileyo leyo: uya kugcina ukugcina iifonti engaphezulu kunaleyo uza kuyisebenzisa. Kodwa akukubi ukuba amaxesha ngamaxesha ukhangela, uphande kwaye ufumane uhlobo olugqibeleleyo lwale poster uyilwayo ... Kulungile?
Ukufumana iifonti zasimahla akukho lula konke konke: kusengqiqweni, kuthathelwa ingqalelo umsebenzi onzima wokuyila (okanye ukuyila kwakhona) uhlobo lochwethezo. Kuyinyani ukuba uninzi lwethu lubaleka iindleko zoqoqosho zeentsapho ezithile ezichwetheziweyo, ebesingasoze sikwazi ukuzithenga ukuqhubeka nesingqi somsebenzi esiwuphetheyo ... Kodwa kufuneka icaciswe ukuba kukho abayili abavumela nabani na okhuphelayo uhlobo lwabo, nikela isixa osibona silungile ngePayPal. Kwaye oku kufanelekile, kusengqiqweni kwaye kuluhlobo oluthile lwentlawulo, ukuba nje siyawuxabisa umsebenzi waloo mntu kwaye sibanike nemali esinokubanika yona ngelo xesha. Kodwa masifike kwinqanaba: rhoqo ngolwesiHlanu sipapasha iposti ethi iqulethe iintlobo ezintlanu zasimahla. Kwaye ngoku sikwesithandathu! Ke kuya kufuneka ume iposi yokuqala, el segundo, elesithathu, Igumbi y owesihlanu, ukuba awukenzi njalo, ukufumana iifonti ezingama-30 (ewe, iposti ithatha isahlulo esiphindwe kabini). Qhubeka ufunda ukuze ubone ukuba sikuzisele ntoni namhlanje.
Ebumelwaneni- Olu hlobo lochwethezo lusekwe kumbhalo omtsha, ongalinganiyo. Ilungele iiposta, kuba ifonti inabalinganiswa abaninzi. Eyilwe yinkampani ye-Omnibus.
GlobalUbungakanani obuncinci bokuchwetheza kunangaphambili. Musa ukoyika xa ubona amaxabiso: ubunzima onokuzikhuphela buphakathi (iGlobal Medium, iGlobal Medium Italic kunye neGlobal Medium Stencil).
UFlexo: luhlobo lwe-geometric sans typeface, kwisitayile sobuntu. Isebenza kakuhle kuzo zombini izihloko kunye nesicatshulwa, kwaye inokusetyenziselwa isazisi esidibeneyo. Indlela onokuyikhuphela yeyokugqibela, ebizwa ngokuba yiFlexo Caps DEMO.
Isenzi esiCinyiweyo: Idalwe yiJust Studio yoyilo, yinto "ethobekileyo" yosapho lweVerb. Babelana ngamandla kunye nobubele. Singayikhuphela iVerb ekhuselweyo kunye neVenzi eXineneyo rhoqo.
Ishinyene: Luhlobo oluhle, ijiyometri kunye nendawo yokudibanisa engenaserif. Sinezinto ezintathu zokulinganisa: zilungile, ziqhelekileyo kwaye zinesibindi. Ngokwam, ndithanda oonobumba abakhulu ngakumbi kunonobumba abancinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti eziSimahla ezi-5 (VI)